Nezvedu --Wuxi Tecfree International Co, Ltd.
Kupisa exchanger zvikamu
Wuxi Tecfree International Yakavakirwa muWuxi, kumabvazuva kweChina, padyo neShanghai. isu tiri humwe nyanzvi yekutengesa inotarisa kupisa exchanger mhinduro uye muffler inonyanya kushandiswa kwekugadzira michina uye zvigadzirwa zveindasitiri .Takatangwa muna2009, tichipa basa redu kune vatengi vepasirese kubvira ipapo.
Tine nzwisiso yakanaka pamazano evatengi uye zvikumbiro neruzivo uye kumashure kweruzivo.
Zvigadzirwa zvedu zvakaendeswa kuEurope, India, Australia, Israel, Korea etc, zvakakunda kuvimba kutenderera pasirese, kutenda uku kunoita kuti tirambe tichienderera mberi. isu tinofara kuona akawanda uye akawanda michina yakashongedzwa neyedu inotonhorera & maeredhiyo kana muffler
Isu yekushandisa inowedzerwa kune yekurapa uye firiji mota zvakare, isu tinoshanda pahunyanzvi hwekuvandudza mashandiro uye kukosha. Nhengo dzedu dzeR & D dzinofara kuve vari yr service.
Fekitori yedu iri padyo neTai lake, vane hunyanzvi vese vane 55workers, tine zvivakwa zvakaita sevira remoto, muchina weinternet, laser yekucheka muchina, otomatiki inomhanyisa muchina etc.
kugadzirwa kwakavakirwa pa ISO9001 system .Transportation amaneti emhepo kana gungwa ari nyore uye anokurumidza.
Mumakore mashoma apfuura kubva pakagadzwa kambani, isu tagara tichitevedzera mutemo we "mutengi kutanga, kushandira nemwoyo wose kufadza vatengi, neshoko re" kutendeka uye kuvimbika, mutengi kutanga ", uye maererano nezve zvigadzirwa, isu vakatora "kunaka-kutungamirirwa, kunaka" seyedu tsika tsika, kuyedza kupa vatengi nese-kutenderera yakakwirira-yepamusoro masevhisi, panguva imwecheteyo, isu takaita zvakare kuti kambani ivandudze kwenguva yakareba
tichaita zvakawanda uye toita zvirinani muminda yedu, isu tiri kutarisira kugamuchira yako kubvunza nemibvunzo Mune ramangwana.
Inzwa wakasununguka kutibata nesu. Isu takagara takagadzirira kukubatsira.
1401, No.132, Jinzhi plaza, Wuxi, 214031, Jiangsu, Chiina
Tifonere izvozvi: 13771465527
Zvekubvunza nezvezvigadzirwa zvedu kana pricelist, ndapota tisiyire email yako uye isu tichava mukubata mukati maawa makumi maviri nemana.
© Copyright - 2010-2020: Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.
Nhungamiro - Featured Zvigadzirwa - Sitemap